IiRadio zibonakalisa njengomxube omnyama kwi-airline paks yaseRickoooo
umbuzo IiRadio zibonakalisa njengomxube omnyama kwi-airline paks yaseRickoooo
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #735 by spilok
N 737 pak for prepar3dv4, yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kokucofa kwi icon icon. Nje umxube omkhulu omnyama. Naliphi na indlela yokufumana ii-radios ukuba zibonise?
Ps. Oku kwenzeka nakwi-Boeing 717 pak, kunye ne-787 pak
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #768 by spilok
Zonke zihleli ngoku. Ukufakela kwakhona kusetyenziswe ... akuyi kuzama ukubeka i-FSX indiza kwi-PRE3dv4 3 kwakhona.
Ixesha ukwenza page: 0.373 imizuzwana